Kulan looga hadlayey ammaanka caasimadda oo kadhacay madaxtooyada Soomaaliya. – Radio Daljir
Luulyo 15, 2016 10:40 b 0
Madaxweynaha ayaa hadal uu u jeediyay guddoomiyeyaasha, waxaa uu ku ammaanay shaqada wanaagsan ee ay hayaan iyo horumarka ay gaareen, balse looga baahan yahay inay gaaraan horumar ka ballaaran kan ay hadda ku tallaabsadeen ee dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
“Waxaan idin kula dardaarmayaa inaad dadaalka xoojisaan. Dakhliga aad uruurisaan waa inaad nidaamisaan, lana marsiiyo nidaamka maaliyadeed ee isla xisaabtanka, iyadoo la kordhinayo fulinta mashaariicda horumarinta iyo kaabeyaasha dhaqaalaha’’, ayuu yiri Madaxweynaha
Waxaa sidoo kale uu Madaxweynaha ka dalbadey guddoomiyeyaasha degmooyinka inay ka shaqeeyaan bilicsamida caasimadda, maadaama Muqdisho ay tahay muraayaddii dalka.
Munaasabaddan waxaa sidoo kale hadal ka jeediyay Guddoomoyaha Gobolka Banaadir, ahna Duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale, isagoo ka warbixiyey waxqabadka maamullada degmooyinka gobolka.
DHEGEYSO-Puntland oo jawaab ka bixisay hadal kasoo yeeray Galmudug.